Yini ukusetshenziswa kwe-MIM? Nemikhiqizo yeTungsten?
Ngokusekelwe kubuhle be-Metal Injection Molding, imikhiqizo evela ku-MIM ilungele kakhulu izimboni ezidinga izingxenye ezinesakhiwo esiyinkimbinkimbi, ukwakheka okuhle, isisindo sokulinganisa, nokukhiqiza. Thatha imikhiqizo ye-tungsten eyenziwe i-MIM ngokwesibonelo, iTungsten inezinzuzo ezinkulu ezifana ...
Ungayikhetha kanjani imicibisholo?
ngu admin ngo 20-04-24
Kunezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zemidanso emakethe, kusuka kubhedu kuya kwibhande. Njengamanje, ethandwa kakhulu yi-tungsten nickel dart. I-Tungsten iyinsimbi esindayo efanele amadada. I-Tungsten isetshenzisiwe eDarts kusukela ekuqaleni kweminyaka yo-1970 ngoba inesisindo esiphindwe kabili kunethusi, kepha imicibisholo eyenziwe ...
Kungani usebenzise izinsimbi njengokubopha izinsimbi?
Ama-tungsten sinkers aseba impahla ethandwa kakhudlwana yama-bass angler, kepha uma eqhathanisa nomthofu, kuyabiza kakhulu, kungani u-Tessten? Ubukhulu obuncane Ubukhulu be-lead buyi-11.34 g / cm³ kuphela, kepha i-tungsten alloy ingafinyelela ku-18,5 g / cm³, kusho umthamo we-tungsten sinker i ...
Kuyini i-MIM futhi inzuzo yayo?
I-MIM yi-Metal Injection Molding, inqubo yokusebenza kwensimbi lapho insimbi enempuphu ecolekile ihlanganiswa khona nezinto ezihlanganayo ukwenza “imithana yokudla” ebunjiwe futhi yaqiniswa kusetshenziswa ukubumba komjovo. Inqubo yokubumba ivumela ivolumu ephezulu, izingxenye eziyinkimbinkimbi ukuba zakhiwe ngesinyathelo esisodwa. ...